ohnmar November 17, 2012 - 10:57 am သိပ်ကောင်းတဲ့အမြင်တွေကိုပေးတဲ့postဘာဘဲ။တောင်းရမ်းခိုင်းတဲ့ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်
Reply mr TM November 17, 2012 - 7:14 pm အစိုးရရဲ့ပေါ်လစီကိုပထမပြုပြင်ဘို့လိုပါတယ်၊ခလေးတွေအတွက်ရေးကြီးဆုံးကပညာရေးပါ၊ခ လေးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာခလေးတွေကိုထိရောက်စွာနဲ့လေ့ကျင့်ပေးဘို့လိုပါတယ်၊ယိုးဒ ယားနိုင်ငံမယ်ဆိုင်မြို့မှာရှိတဲ့ DEP ဆိုတဲ့ Project တခုမှာအခါလူမျိုးခလေးတွေကိုပညာသင်ပေးနေတဲ့ကျောင်းတကျောင်းရှိပါတယ်အဲဒီကျောင်း မှာယိုးဒယားစာ၊အဂ်လိပ်စာနဲ့လက်မှုနှင့်စက်မှုပညာတမျိုးမျုိးကိုအတတ်သင်ပေးနေတာကိုတွေ့ ဘူးပါတယ်အဲဒီခလေးတွေကလဲမြန်မာပြည်ကခလေးတွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းမှာ လဲအစိုးရနဲ့ NGO တွဲပြီးအမှန်အကန်ပြုစုပြိုးထောင်ပေးရင်နိုင်ငံရပ်ခြားကလဲအကူအညီတွေရမယ်ဆိုရင်အကူ အညီတွေကိုလဲမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးစွဲမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလေလွင့်နေတဲ့ခလေး တယောက်မှရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်တချက်ကအကူအညီပေးမဲ့ NGO ဖြစ်စေမည်သည့်အဖွဲ့အစီးမဆိုဖြစ်စေသူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုလူမျိုးရေးခွဲခြားပြီးနှောင့်ရှက် ခြင်းမပြုလုပ်ဘို့လိုပါတယ်၊ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှာမှန်ကန်ရင်မည်သည့်အဖွဲ့အစီးကိုမဆိုလုပ် ပိုင်ခွင့်ပေးသင့်ပါတယ်။
Reply mgoogyaw November 17, 2012 - 8:01 pm That should be done accordingly, Burma is down in the hell with records level of poverty, uneducated,lack of knowledge among the people.The Authority must take action deeply and effectively, seriously to the Gangster,who bullied, tortured and ordered the pitying poor children to become beggars,including some parent. All must take immediate action. Many Foreigners are coming to Burma,now, if, we let these children beggars on the Road, it is very shameful for our country.